Ny fianarana ny lalao ho an'ny ankizy - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Online lalao dia mampiofana ny heviny manokana,-pampianarana fotoana. Tsy manome fotsiny ny asa ho ny kajy, na taratasy, ka mandrisika nahita valiny haingana. Indraindray ianao vao mametra ny fandehan'ny fotoana, fa misy kokoa ny fomba famoronana. Eto dia azo atao ny hahalala ny zavatra isan-karazany: mozika, fanafody, fandrahoan-tsakafo sy ny sisa.
Tsindrio ny Sahona soratsoratan'ny
Hetsika ho an'ny sekoly andro mahafinaritra
Zazalahy ao amin'ny seranam-piaramanidina
Elitikan'ny aritaly fanabeazana
Bike Racing Math fanampiny
Flossy sy Jim dia manisa ny Llamas
Ny sarimiaina efitra kely
Betsy's Crafts Perler dia mamy Krismasy
Mandehana ry Titans tanora! Ahoana ny fanaovana sary ny Cyborg
Inona no ho avy manaraka?
Lalao ho an'ny isa sy abidia ho an'ny ankizy
Fanontaniana matematika tsy voafetra
Duel Mathuel 2 mpilalao
4 Pics 1 Teny-Online
Lalao Learning tamin'ny Category:
Farany mianatra lalao
Vonona ny hitombo amin'ny preschool amin'ny alàlan'ny habakabaka!
Abidia ho an'ny ankizy
Lalao matematika ho an'ny ankizy
Vanja milevina matematika
Telefaona ho an'ny zazakely
Lalao fanabeazana saka fianakaviana
Lalao Online Rehetra Ny fianarana ny lalao ho an'ny ankizy
Fanabeazana lalao ho an'ny ankizy – mba hampitombo tsara kokoa ny tsy mihevitra
Karapuz toy ny ray aman-dreny mitady kafanam-po manao zavatra eo amin'ny solosaina, dia hiandrandra ny haka tahaka. Noho izany, ny reniko mihazona ny zaza ao an-am-pofoany, manokatra ny fanabeazana lalao ho an'ny ankizy. Tokony hampiseho azy ny zavatra tsotra iray totozy sy ny fitendry toy ny zaza taorian'ny ezaka maro no deftly mitarika ny zana-tsipìka ny zavatra teo amin'ny efijery.
Raha tsy afaka hifantoka amin'ny Zanaka sy zanakavavy ilaina lesona, fa ankehitriny izy ireo dia mazàna no atao fiofanana. Ho an'ireo izay mbola tsy namaky, ilay feo-ny mampahalala ny asa, ary taorian'ny fampisehoana, zazalahy kely izany filalaovana mahazo tsara-mendrika ny fiderana.
nitsidika tsy tapaka ity fizarana ity, ny zaza tsy miankina ho ela dia namaky, satria amin'ny fianarana ny lalao amin'ny teny tsotra dia mahazo ny asa tsianjery taratasy tsirairay, ary nanampy azy ireo ho teny. Ohatra, dia ilaina ny mahita taratasy izay manomboka ny anaran 'ny zavatra. Na eo ambanin'ny sary hameno ny kianja foana, solon'i ny taratasy mba haka ny teny midika ny zavatra.
Fa ny fananganana ny mahafinaritra toy izany, dia nanome ny lalao:
Ary amin'ny saina sy ny fahatsiarovana
Ny fomba fisainany sy ny lojika
Puzzles amin'ny teny saro-pantarina
Fanabeazana lalao ho an'ny Preschoolers – Rehetra ny tsara indrindra ho an'ny ankizy
Inona avy ireo lalao ho an'ny Preschoolers fanabeazana? Izy io dia zavatra izay mampianatra ankizy mba hamantatra zavatra amin'ny toetra: loko, habeny, endriny, izany, manana aina sy ny velona. Games vitsivitsy dia ho azy hahatsiaro ambaratonga fotoana ao anatin'ny taona, mifantoka amin'ny ny soritr'aretina; maro loko mba hahazo vaovao, rehefa fampifangaroana; niely ny vondrona ny zava-maniry, ny bibikely, ny biby sy ny vorona; fanasokajiana teknika: fiaramanidina, mitondra fiara sy ny filomanosana.
ny ankizy aza dia tsy hahatsikaritra izay nampiofana amin'ny fampitahana ny dian-tongotra tao amin'ny fasika amin'ny nohosorany loko mainty ny biby. Nandritra ny asa fitoriana mba hanadio ny trano, dia tsy maintsy hahita mpilalao eo amin'ny korontam-bato ny kilalao samihafa zavatra voalaza ao amin'ny lisitra, ary nalefako tany amin'ireo toerana. Dia hampitombo fandinihana sy hahatonga ny zaza mifantoka kokoa, contemplative.
ny ankizy ny mianatra be dia be kokoa, toy ny anaran 'ny singa ny natiora. Ny lalao dia hampiseho ny fomba hijery toy ny solontenan'ny bibidia sy ny zavamaniry, ary koa fa ilaina ny mahita ny asa ny tanora reny sy hizara amin'ny toeram-ponenana.
Mahaliana ny mahafantatra izay dia ny asa sy ny endri-javatra miavaka. Mandehana alalan 'ny asa, izay fitaovana sy ny endrika ilaina ny mamaritra ny karazana asa.
Young Gamers dia hahatsiaro ny andro amin'ny herinandro, ary ny anaran 'ny volana aza samy manao amin'ny tanana ny rantsantanany, ny anarana vatana faritra, mba hahafantarany izay olona nitaiza, hitombo ny voninkazo na ny lolo, tsarovy azo hanina sy inedible, mianatra ny fotoana eo amin'ny famantaranandro sy ny loko Rainbow.
fanabeazana ny lalao ho an'ny ankizy mba hanampiana ny ray aman-dreny
Ny ray aman-dreny ny asa bebe kokoa, ary kely kokoa ny fotoana ho an'ny ankizy. Ao amin'ny fotoana fohy dia ilaina ny manana fotoana mba hanome sakafo sy ny hividy izany, dia anontanio momba ny fahombiazana tao amin'ny saha, voly, ny fanatanjahan-tena lesona, mamaky angano. Matetika ny ankizy mitady fialan-tsiny mba tsy misy mianatra, ary avy eo dia tonga ny fanavotana ny fanabeazana lalao ho an'ny ankizy.
Nandritra ny 30 minitra isan'andro ny ankizy mianatra ny lesona ny virtoaly kokoa noho ianao dia tsy maintsy mampiasa vola eo an-dohany mandritra ny herinandro. Izy adala amin'ny fanaraha-maso ny dingana sary sy miezaka manao araka ny marina ny asa, satria manana fandrisihana – mahazo lalao teboka. Ny zava-drehetra dia mifototra amin'ny ny te hahafanta-javatra ny ankizy: Inona no ho avy raha manao izany eto? Koa ny fientanentanana – maniry ny ho ny tsara indrindra. Izany ihany koa ny fomba hifandraisana amin'ny zanakao, manampy azy hahatakatra ny asa sy mba hanampy hiatrika ny fanodinkodinana ny fanaraha-maso sy ny totozy fitendry.